Faahfaahin: Rasaas lala beegsaday guriga madaxa xukuumadda Galmudug – Bandhiga
Faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa shaqaaqo xalay ka dhacday gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug.
Sida ay u xaqiijiyeen idaacadda Bandhiga ee magaalada Muqdisho dad ku sugan Dhuusamareeb ciidamo la sheegay in ay ka tirsan yihiin dowladda federaalka ayaa rasaas ku furay guri uu magaalada ka deggan yahay madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan.
Taliyaha ciidamada booliska Cabdullaahi Macallin Xasan oo saaka la hadlay warbaahinta ku hadasha Afka dowladda Maraykanka ayaa meesha ka saaray in wax khasaare ah ay sababtay israsaaseyntaasi xalay Dhuusamareeb ka dhacday.
Wuxuu sheegay in wax sidaasi u weyn aynaan ahayn, isagoo intaas ku daray in aysan jirin ciidamo gaar ah oo la wareegay xarumo ku yaalla Dhuusamareeb, walloow shalay galinkii dambe warar sidaasi sheegaya ay soo baxeen.
Taliyaha ayaa tilmaamay in ammaanka magaalada ay sugayaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo halkaasi ku sugan.
Lama oga waxa ay arrintaan ku dambeyn doonto, waxaase ay ku soo aadeysa xilli Sheekh Shaakir uu magacaabay guddi doorasho oo Galmudug.